कस्ता व्यक्तिहरुले खानु हुँदैन कागती पानी जान्नुहोस ? – Annapurna Daily
कस्ता व्यक्तिहरुले खानु हुँदैन कागती पानी जान्नुहोस ?
On May 21, 2021 8,145
काठमाडौँ । गर्मीमा कागती पानी अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ । गर्मीमा यसलाई सर्वतको रुपमा प्रायोग गरिन्छ भने अन्य जुनसुकै समयमा पनि अचार बनाउने काममा बढी प्रयोग गरिन्छ ।